SAWIRRO: Cayaartoyda 11-jirada oo aas-aas u noqon doona kooxda Munishiibiyo | Jubbaland Media Online
SAWIRRO: Cayaartoyda 11-jirada oo aas-aas u noqon doona kooxda Munishiibiyo
Posted on February 19, 2016 in Arrimaha Bulshada, Feat, Wararka // 0 Comments
Maamulka Gobalka Banaadir oo xaley xaflad casho sharraf u sameeyay cayaartoyda 11-jirada
Maamulka Gobalka Banaadir ayaa xaley xaflad casho sharraf ah u sameeyay cayaartoyda iyo macallimiinta Soomaaliya u matalayay tartankii kubadda cagta Jeem Cup oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Dooxa ee dalka Qadar.
Duqa Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa xafladda ka sheegay in maamulka gobalka Banaadir uu dib u soo celin doono kooxdii Munishiibiyo oo ay la hayd dowladii hose taasoo 25-kii sanno ka hor burburtay.
Wuxuu sheegay in cayaartoyda 11-jirada ee ka qeybgalay tartanka Jeem Cup ay aas-aas u noqon doonaan dhismaha kooxda dowladda hoose oo dib loo soo nooleen doono.
Guddoomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa sheegay in cayaartoydan yer-yerka ay guulo iyo sharrafba u keeneen dalka Soomaaliya, wuxuuna sheegay in maamulkiisa uu il gaar ah ku heyn doono siddii loo xanaaneen lahaa cayaartoydan.
Duqa Muqdisho ayaa abaalmarino guddoonsiiyay cayaartoyda iyo macallimiinta, wuxuuna sheegay in maanta wixii ka dambeeya ay ka mid noqon doonaan kooxda Munishiibiyo.
Tan iyo shaley xaflado soo dhaween ah ayaa Muqdisho loogu sameeyay cayaartoyda 11-jirada ee Soomaaliya uga qeybgalay tartankii Jeem Cup ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Dooxa ee dalka Qadar.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay ku soo dhoweeyay garoonka diyaaradaha cayaartoydan 11-jirada, isagoona bogaadiyay guusha ay soo hoyeen.
Guddoomiyaha gobalka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale midig iyo wasiirka howlaha guud ee Eng, Saalax Sheekh Cismaan Muuse
Sawirkan waa xarunta Aqalka dowladda Hoose ee xafladda loogu sameeyay cayaartoyda 11-jirada
Cayaartoyda 11-jirada oo aas-aas u noqon doona kooxda Munishiibiyo